के अमेरिकाले जानाजानी चीन-अमेरिका सम्बन्ध नष्ट गरिरहेको त छैन? – BANKE POST
वाशिंगटनले २०१९ देखि अमेरिकामा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र पत्रकारमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनियाँ मिडियाको एउटा समूहलाई “विदेशी मिसन” भनेर परिभाषित गरेको छ र केही चिनियाँ पत्रकारलाई देशबाट निष्कासन गरेको छ । यसले चीन-अमेरिकी कर्मचारीको आदानप्रदानलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। ह्युस्टनमा चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गरेर अमेरिकाले भियनना सम्मेलनको नियम उल्लंघन गरेको छ। त्यसको जवाफि प्रतिक्रियामा चीनले छन्दुमा रहेको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न भनेको छ।
यसरी दुई शक्तिशाली राष्ट्र एक अर्काको वाणिज्य दूतावासहरू बन्द गर्दै छन्।
शीतयुद्धको युगमा अमेरिका र पूर्व सोभियत संघले त्यसो गर्नु भन्दा चीन र अमेरिकाले एक अर्काको कूटनीतिक संस्था वा कूटनीतिज्ञलाई दोष दिन धेरै गाह्रो छ। चीन र अमेरिका विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय कारोबार मध्ये एक हो, र कर्मचारी विनिमय सामान्य परिस्थितिमा धेरै सक्रिय थिए। दुबै पक्षले त्यस्ता आदानप्रदानहरू प्रबन्ध गर्न धेरै वाणिज्य दूतावासहरू राख्न आवश्यक छ। COVID-19 ले चीन-अमेरिकी कर्मचारी आदानप्रदानमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ। ह्युस्टनमा चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गरेर के अमेरिकाले महामारीको स्थिति सुधार गर्छ? चीन र अमेरिकाको बीचमा कर्मचारी आदानप्रदान पुनर्स्थापित गर्ने आशा गर्दैन?
धेरै व्यक्तिहरू यो विश्वास गर्छन् कि यो ट्रम्प प्रशासनले चीन-अमेरिका तनाव सिर्जना गर्दछ र उनको पुन: चयन प्रयासहरूमा मद्दत गर्दछ। अमेरिकाले चीनमा भएका सबै कुरालाई दोष दिन खोजिरहेको छ र चीनलाई राम्रोसँग नबुझ्ने अमेरिकी मतदाताहरूलाई वाशिंगटनको वचनमा विश्वास गर्न लगाउने छ। नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावले वाशिंगटनलाई बौलाहा बनाइरहेको छ।
यस समय, विश्वले थाहा पाउँदछ कि अमेरिकाले जानाजानी चीनको बिरूद्ध नयाँ युद्ध सुरु गर्दैछ । अमेरिकाको कडा निन्दा गर्ने क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भन्यो कि यदि अमेरिकाले आफ्नो गल्ती सुधार गर्दैन भने चीनले कडा प्रतिक्रिया दिनेछ। त्यहाँ चीनले लिन सक्ने धेरै काउन्टरमेजरहरू छन्।
अमेरिकाले “बौद्धिक सम्पत्ति” र “निजी सूचना” उल्लेख गरेको छ जुन ह्युस्टनमा चिनियाँ वाणिज्य दूतावासले अमेरिका विरुद्ध अवैध गुप्तचर गतिविधिमा भाग लिएको देखिन्छ। अमेरिकाले यसको विश्वसनीयता गुमायो। अमेरिकामा चिनियाँ वाणिज्य दूतावासहरूको आकार दैनिक कार्यको आवश्यकता भन्दा ठूलो छैन। यी कुनै पनि वाणिज्य दूतावासमा हजारौं कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू छैनन्, हङकङमा र मकाओका अमेरिकी वाणिज्य दूतावासहरू जस्ता। यो गोप्य कुरा होइन कि अमेरिकाले हङकङ र मकाओमा रहेको आफ्नो वाणिज्य दूतावासलाई चीनमाथि आक्रमण गर्न किल्लाको रूपमा देखायो।
अमेरिकाले कूटनीतिक रणभूमि खोलेको छ जुन हराउनको लागि हो। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव २१ औं शताब्दीमा प्रमुख शक्ति सम्बन्ध लागत छ। मानिसजाति, जसले शान्ति, स्थिरता र विकास चाहान्छ, यसको लागि चुकाउनु पर्छ। व्यक्ति र राजनीतिक समूहहरूले अमेरिका र विश्वको सार्वजनिक हितको विस्मयकारी क्षति नियन्त्रण गुमाउँदैछ।यस समय, विश्वले थाहा पाउँदछ कि अमेरिकाले जानाजानी काउन्टरमेजरहरू छन्।अमेरिकाले कूटनीतिक रणभूमि खोलेको छ जुन हराउनको लागि हो। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव २१ औं शताब्दीमा प्रमुख शक्ति सम्बन्ध लागत छ। मानिसजाति, जसले शान्ति, स्थिरता र विकास चाहान्छ, यसको लागि चुकाउनु पर्छ। व्यक्ति र राजनीतिक समूहहरूले अमेरिका र विश्वको सार्वजनिक हितको विस्मयकारी क्षति नियन्त्रण गुमाउँदैछ।लेखक -शिबराज कार्की
अजय पाठक२ असोज, बाँके- छिमेकी मुलुक भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर कालोबजारी गर्दै आएका छन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रशासनले बजारको अनुगमन गर्दै कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाइ जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ । यस्तै काठमाडौंमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । […]